नेपाल आज | छबिले हानेर फुटेको सिल्पाको कानको जाली ठिक भयो की भएन होला ?
मङ्गलबार, २७ साउन २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
शिल्पा पोखरेलको जन्म पूस ६ गते विराटनगर मोरंगमा भएको थियो । शिल्पा पोखरेल नेपाली मोडल तथा ब्यूटीशियन हुन्, जसले लज्जा फिल्मबाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी थिइन् । शिल्पाले ठूलो र्पदामा प्रर्दशन गर्नु अघि संगीत भिडियोहरूको संख्यामा अभिनय गरिसकिन् । उनले विराटनगरमा स्कुल शिक्षा पूरा गरिन् र पछि उनी उच्च अध्ययन र मोडलि करियरको लागि काठमाडौं बस्न थालिन् ।
शिल्पा पोखरेलले २०७३ असार २९ मा एक सफल फिल्म निर्माता छबिराज ओझासँग आधिकारिक रूपमा विवाह गरकी थिईन् । उनी छबिराज ओझाकी चौथी पत्नी बनेर भित्रिएकी थिइन् । २०७६ सालमा शिल्पाले उनका पति छवीको विरुद्ध महानगर पुलिस सर्कल टेकुमा मुद्दा दर्ता गरेपछि उक्त जोडी विवादास्पद भाइरल भएका थिए । सोही झगडामा निर्माता ओझाले पोखरेललाई सधैँ शंका गर्ने गरेको आरेप लागेको थियो । थुप्रै अन्तरर्वाताहरुमा पनि शिल्पाले छविले थुप्रै आरेपहरु लगाउने, कपाल समाउने , पिट्ने गरेको कुरा सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
बिहे गर्नु अघि आफ्नो एउटा ब्वोइफे्रन्ड भएको कारणले पनि शंका गरिएको शिल्पाले बताएकी थिइन् । विवाह भएको १ महिनासम्म सम्बन्ध एकदमै राम्रो भएको तर समय बित्दै गएपछि शारिरीक हमला हुन थालेको उनले बताएकी थिइन् । कुटपिटको कारण नै शिल्पाको कानको जाली फुटेको भन्ने खबर पनि आएको थियो । कानको जालीमा समस्या भएमै कारण उनलाई स्पिकर नजिक नबस्नु भनिएको कुरा पनि उनले बताएकी थिइन् । उक्त घटनामा छविले शिल्पालाई माफी पनि मागेका थिए ।
के ओझाको माफीले शिल्पाको कानको जाली ठिक भयो होला त ? अहिले उनीहरुको झगडा मिलिसकेको भएपनि अब उनीहरु सँगै बस्छन् वा बस्दैनन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन । जहाँसम्म शिल्पाको कानको जालीको कुरा छ, उनको कानको जाली ठिक भईसकेको छ ।